Fomo: Meewanye mgbanwe site na Nkwado Nlekọta | Martech Zone
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na mbara igwe ga-agwa gị na ihe kachasị na-emeri ịzụta abụghị ụgwọ, ọ bụ ntụkwasị obi. Zụta site na ụlọ ahịa ọhụụ na-ewepụ okwukwe site na onye na-azụ ahịa nke na-azụtụbeghị na saịtị ahụ na mbụ.
Ihe ngosi ntụkwasị obi dị ka ịgbatị SSL, nlekota nche nke atọ, na ọkwa na nyocha niile dị oke egwu na saịtị azụmahịa n'ihi na ha na-enye ndị ahịa ahụ echiche na ha na-arụ ọrụ na ezigbo ụlọ ọrụ ga-anapụta nkwa ha. O nwere ihe ndị ọzọ i nwere ike ime!
Fomo bu ulo ahia di n’iru na ntaneti ahia n’enye ndi mmadu ihe nlebara anya na saiti. Ihe ngosi aka ndi mmadu a nwere ike igbalite ntughari site na 40 rue 200%, nke bu ihe ngbanwe egwuregwu maka ulo ahia obula. Nke a bụ nseta ihuenyo nke ngosi Fomo na ụlọ ahịa na-arụ ọrụ:
Site n'igosi ire ahia ka ha na eme na saiti gi, inwee uru ato karie ndi mpi gi:
Mepụta Uche nke gencydị Ngwa Ngwa - Fomo na-egosiputa iwu ka ha na - eme, na - eme ka ụlọ ahịa gị bụrụ ebe obibi na - atọ ụtọ ma na - akpali ndị na - azụ ahịa ihe.
Ndị ahịa na-eche na ha so n’ìgwè mmadụ ahụ - Ngosipụta Fomo dị ka ezigbo akaebe maka ụlọ ahịa gị - ịhụ ndị ọzọ na-azụta na-ewuli ntụkwasị obi ozugbo.
Nkwado Social + ntụkwasị obi - Ndị ahịa nwere ike ịhụ ihe ndị ọzọ na-azụta - na-enye ụlọ ahịa gị ntụkwasị obi ma na-ewulite onye ọrụ ọrụ ntụkwasị obi.
Fomo ka ejikọtara ya na 3Dcart, Mgbasa Ozi Oge, Aweber, BigCommerce, Calendly, Celery, ClickBank, Pịa Hubspot, Infusionsoft, Instagram, Instapage, Intercom, Judgeme, Obiọma, Okpukpo ndu, Magento, Mailchimp, Neto, Privy, ReferralCandy, Selz, SendOwl, Shoelace, Shopify, Shopper kwadoro, Squarespace, Stamped, Stripe, Teachable, ThriveCart, Trustpilot, Ụdị ụdị, Unbounce, Eluigwe na Ala, ViralSweep, Wix, Woo Commerce, WordPress, Yotpo, Zapier, Zaxaa, na ha nwere API.
I nwere ike na-edebe otú gị Fomo ozi na-impacting gị ahịa. Otu onye ọrụ Fomo kesara na n'ime otu ọnwa ọ hụla azụmahịa 16 metụtara ngwa ahụ na oke nha dị elu, na-akpata ihe karịrị $ 1,500 na ego ọzọ. Nke ahụ bụ ezigbo nlọghachi na ntinye maka ngwa ọrụ na-efu ihe dị ka $ 29 kwa ọnwa!
Bido Ọnwụnwa Fomo gị n'efu taa!
Tags: 3dcartMgbasa Ozi Arụ ỌrụAWeberBigCommercenke ọmaCeleryclickbankPịaFunnelsClinikoConvertKitanakpontụkwasị obiObi Ụtọntapuecommerce na-elekọta mmadụ akaebeEcwidihe omumeFacebookgatsbyNweta azịzanyocha googleGumroadokpokoromụbaa mgbanweMicrosoftinstagramNtughariájáOnyeikpeObiọmaLeadPagesmagentomailchimpNetogwanzuzontughariselzZipueririakpukpoukwuụlọ ahịashopify tinye-onszụta pluginszụọ ahịaShopper Mmankwado mmadụsquarespaceTụrụstraipuAzụmahịaThriveCartndị na-egosi ntụkwasị obintụkwasị obiụdị ụdịadịghị amaeluigwe na alaViralSweepwixwoo azụmahịaWordPressYotpoikeZaxaa